XOG: Heshiis miyey gaaren Suldaan Siciid Suldaan Cabdisalaan & M/weynaha Puntland?
November 11, 2019 Mahad Jama 2
GAROOWE(P-TIMES) – Madaxweynaha Puntland Siciid Deni ayaa kulan gaar ah la yeeshay habeen kahor suldaanka guud ee beesha Warsangali Suldaan Siciid Suldaan Cabdisalaan, kaas oo ka dhacay qasriga Madaxtooad ee magaalada Garoowe, maalmo kahor markii xilka laga qaaday Gudoomiyaha baarlamaanka Puntland CabdiXakim Dhooba-Daareed, ayna jireen kacdoomo ama carada ka dhalatay talaabadaas oo ay gadaal ka riixaysay Madaxtooyadu.
Warsidaha PuntlandTimes oo horey u baahiyey macluumadka la xariira kulankan, gaarka ah ayaa ogaaday in kulanka labada dhinac dhexmaray ay uga wada hadleen arrimihii dhacay oo dhan oo ay is afgarad ka gaareen.
PUNTLANDTIMES, waxay ogaatay in Odayaasha iyo Suldaanka Beelaha Sanaag & Haylaan ay aqbaleen raaligalin ku wajahan dhacdadii ay Xukuumaddu ku weerartay xarunta baarlamaanka Puntland.
Sidaas oo kale, madaxweynaha Puntland ayaa bixiyey magdhaw ku wajahan dhacdadaas cidii wax ku noqotay, gaar ahaana Askari kasoo jeeda beesha gobalka Sanaag oo ku geeriyooday dagaalkaas.
Khilaafkii iyo dhacdada ku saabsan mooshinkii Afhayeenka baarlamaanka Puntland ayuu iska fogeeyey Madaxweyne Deni, isagoo sheegay in ay ahayd howl u taalay laamaha dawladda, balse uusan si shaqsi ah isagu cidna weerar iyo godob ugu qaadin, balse ay ahayd sharciyad khilaafkooda lagu xaliyey.
Warar hoose ayaa sheegaya in ay ka wada hadleen labada dhinac, gaar ahaana Suldaan Siciid iyo Madaxweynaha Puntland, cidii bedeli lahayd Afhayeenka baalamaanka ee hadda xilka laga qaaday, iyadoo ay dhinacyadu kala qabeen aragtiyo kala duwan.
Xogta aan helnay ayaa sheegaysa in uu dhacay is afgarad ku wajaan cida noqonaysa gudoomiyaha cusub ee baarlamanka oo ay jirto doonis ay wateen Odayaasha la kulmay Madaxweynaha Puntland, inkastoo ay ilo wareedyadu ka gaabsadeen sheegida shaqsiga labada dhinacba ay isku afgarteen.
Laakiin, Madaxweynaha Puntland iyo Saaxiibadiisa siyaasadda ayaa ku kala aragti duwan cida noqonaysa Afhayeenka baarlamaanka, waxaana kala aragti duwanaanshuhu uu gaarsiisan yahay in la kala taageero labo musharax, balse dhibaatada ugu weyn ayaa ka taagan xagga cidii hogaamisaaba ay tahay in xooga la saaro.
Mr, Dhooba-Daareed ayaa loo arkaa nin caqabad ku noqon kara howlaha Xukuumadda Puntland ee kuwajahan gobalada Sanaag & Haylaan, isagoo halkaas hadda ka wada latashiyo kala duwan, laakiin isaga laftirkiisa caqabadaa haysta, waxaa kamid ah in gudoomiye cusub oo la doorto uu noqdo nin saameyn weyn kaga leh gobaladaas.
Mahad, qabyaalad baa ku jiidatey, warkaasi waa been. Cid is afgaratay iyo cid ka wada hadashay ma jirto.
Waxan kuu arkayey nin saxaafadda mustaqbal ku leh, laakiin waxad noqotay fannaankii qabiillada heesaha aflagaadada ah u qaaday, dabeedna fankiisii gubtey.
Dadka dalka dab ha ku qabanina, been waa xaaraan. Ishaan ku haynaa ilahabeenta faafiya, isdabaqabo nonyohow.
Puntland dhismaheeda dhiig baa ku daatey cid laga yeelayo inay burburiso majirto.
Mr Dhoobo waa inan loo gacan haatiyey, waxeey aheed inuu showro midnimada Puntland, qof walba oo xukunka qabto waa inuu dhowraa hadii kale iska warejiyaa.
Waxaa soo harey kooxdan saddexda habar saleeban ama maxamuud saleeban dadka idinladagan wax u ogolaada hadii kale filinka waa soo dhamaan.
Dhulbahante dhulkoodi oo dhan waxaa heysta Somaliland saas ey tahay Puntland wax muuqda ayaa laga siiyay.
Waa in la xisaabtamaa